Tapakila fiaran-dalamby ICE mora ary vidin-dalambe | Save A Train
Tapakila fiaran-dalamby ICE mora ary vidin-dalambe
an-trano > Tapakila fiaran-dalamby ICE mora ary vidin-dalambe
Eto ianao dia afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba an'i Alemanina Tapakila fiaran-dalamby ICE SY Vidin'ny fitsangatsanganana ICE ary tombony.
Lohahevitra: 1. ICE amin'ny alàlan'ny Hevitra Misongadina
2. Momba ny Train ICE 3. Fiatrehana ambony hividy tapakila fiaran-dalamby ICE
4. Ohatrinona ny vidin'ny tapakila ICE 5. Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsaratsara kokoa to raiso ny lamasinina ICE, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
6. Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny kilasy mahazatra sy ny kilasy voalohany amin'ny ICE 7. Misy famandrihana ICE ve
8. Fotoana firy talohan'ny fiaingan'ny lamasinina ICE 9. Inona no fandaharam-potoanan'ny fiaran-dalamby ICE
10. Iza ireo onjan'ny ICE atolotry ny ICE 11. IQ mampiofana FAQ
ICE amin'ny alàlan'ny Hevitra Misongadina
Ny lamasinina haingana indrindra any Alemana dia ny lamasinina ICE miaraka amin'ny hafainganana 300km / ora.
Tizy no manamboatra fiaran-dalamby ICE an'ny rafitra lalamby alemana mampitohy ny tanàna rehetra ao Alemana.
Amin'ireo lamasinina rehetra mandeha amin'ny Rafitra lalamby alemanina, ICE dia an'ny sokajy A.
Ny lamasinina ICE dia natao hifaninana amin'ireo fiaramanidina amin'ny lafiny fampiononana sy fotoana ahatongavana.
Ny zotra iraisam-pirenena an'ny ICE dia misy an'i Frantsa, Belzika, Danemark, Aotrisy, ny Pays-Bas, ary Soisa.
Momba ny Train ICE
Intercity-Express na amin'ny anarany hitsin-dàlana ICE dia rafitra iray an'ny fiarandalamby haingam-pandeha an'ny Deutsche Bahn, Mpanome lamasinina nasionaly Alemana. ny Lamasinina ICE fantatra amin'ny rendrarendra, hafainganam-pandeha, ary ny fampiononana rehefa mampifandray ny tanàna rehetra any Alemaina izy ireo.
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 300km isan'ora, Ny fiaran-dalamby ICE no lalana haingana indrindra handehanana anelanelan'ny tanàna lavitra toa an'i Cologne sy Hamburg.
Làlana fitsangatsanganana ICE Tsy voafetra ho any Alemana ihany. Ny lamasinina dia mandeha amin'ny zotra iraisam-pirenena mankany Austria, Frantsa, Belzika, Soisa, Danemark, ary Holandy.
Mandeha Tehirizo ny tranokala fiaran-dalamby na ampiasao ity widget ity hikarohana azy tapakilan'ny fiaran-dalamby ho an'ny lamasinina Ice
– Tehirizo ny App Train Train Train
– Tehirizo Aplikan-tsofina Android
Daty miverina (tsy voatery)
Fiatrehana ambony hividy tapakila fiaran-dalamby ICE
isa 1: Soraty mialoha araka izay tratranao ny tapakila ICE
Raha te hahazo ianao tapakila ICE mora, ny taloha dia mividy azy ireo, ny lehibe kokoa ny fahafahanao mahazo azy ireo mora. Misy 3 karazana sarany mora ICE ary ny karazana tapakila telo dia azo alaina amin'ny fotoana amidy voalohany, fa ny mpamonjy saran-dàlana, Vidim-panavotana, ary Super sparpreis mety tsy misy satria manakaiky ny andro fialana. Azonao atao ny mamaky tapakila amam-bidy haingana kokoa 6 volana mialoha ny niainga.
isa 2: Mandidia ny tapakilan'ny lamasinina ICE rehefa azonao antoka ny làlan-kaleha
Ny antoka ny fitsangatsanganana sy ny fandehananao dia mety hamonjy vola amin'ny vola andoavana vola. Ny tahan'ny famerenam-bola sy ny safidy amin'ny famerenana ny tapakila ICE tsy ampiasaina dia miankina amin'ny karazana tapakila novidinao. ihany koa, ny saram-bola dia ambany noho ny tapakilan'ny saran-dalan'ny mpamonjy noho ny tapakila mahazatra. Mariho fa tsy hamerina anao amin'ny vola DB rehefa miverina ny tapakilao. Ny famerenam-bola DB dia atao amin'ny alàlan'ny voucher DB, izay azonao ampiasaina handoavana ny serivisy omeny. Azonao atao koa ny mivarotra ny anao Tapakila fiaran-dalamby ICE an-tserasera amin'ny forum internet raha tianao ny hamerina ny vola.
isa 3: Mandehandeha lamasinina ICE mandritra ny vanim-potoana tsy an-tampony
Ny tapakila ICE dia mora vidy kokoa amin'ny vanim-potoana tsy misy farany (Talata, alarobia, Alakamisy, and Saturday). Mandritra ny andro farany, ny tapakila mora vidy dia lafo be, avelao ny tapakila Flexpreis ihany. Ny fitsangatsanganana amin'ny andro Peak, boky mialoha raha ahazoana ny tapakila saran-dàlana. Raha tsy azonao ny tapakilan'ny saran-dàlana azo antoka, aza adino ny mandeha antoandro hariva sy maraimbe (noho ny mpandehandeha mpandraharaha) satria ho mora kokoa ny tapakila Flexpreis amin'izay. Farany, aza mandeha intsony -bahoaka sy ny fialantsasatry ny sekoly satria hiakatra koa ny vidin'ny tapakila ICE.
isa 4: Vidio ny tapakilan'ny ICE amin'ny Save A Train
Ho hitanao ny fanomezana tsara indrindra ny tapakilan'ny lamasinina ICE any Eropa amin'ny tranokalanay, Save A Train. Izahay dia manana tolotra be indrindra amin'ny tapakilan'ny lamasinina any Eropa sy izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fifandraisanay amin'ireo mpandraharaha ny lalamby sy ny algorithma mety, manolotra anao ny tapakila ICE mora vidy indrindra izahay vao afaka mahita. ihany koa, mahita alternatives mora ho an'ny lamasinina hafa ankoatry ny ICE.
Ohatrinona ny vidin'ny tapakila ICE?
Ny vidin'ny tapakila ICE dia miankina amin'ny karazana tapakila sy ny kilasy tianao. amin'ny ankapobeny, Anarana lalamby dia malaza amin'ny ambany ny vidin'ny tapakila ICE. Misy karazany telo ny tapakilan'ny lamasinina ICE - ny tapakila mahazatra na Flexpreis, ny tapakilan'ny saran-dalan'ny Supersaver na Supersparpreis, ary ny saram-panafody na tapakila Sparpreis ICE. Ny tapakila fitsangatsanganana zotra kokoa dia lafo kokoa noho ny tapakila mahazatra, nefa mihena ny tapakila misy rehefa manakaiky ny andro fialana. Ny vidin'ny tapakila ICE Miankina amin'ny kilasy nofidinao ary eto no latabatra famintinana ny vidin'ny salan'isa isaky ny kilasy:
Tapakila tokana Dia mandroso sy miverina
Malagasy 17 € – 50 € 30 € – 120 €
raharaham-barotra 40 € – 87 € 80 € – 180 €
Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mandeha lamasinina ICE, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina?
1) Fadio ny fomba fiasa mialoha ny fanaovana board. Raha manana sidina ianao 9 aho, tsara kokoa ianao raha eny amin'ny seranam-piaramanidina farafaharatsiny 7 Vokatr'izany dia tamin'ny fotoana tsy maintsy nandalovanao ny fomba mialoha ny fitantanana ary ny fanaraha-maso ny fiarovana, efa ho fotoana izao hidinanao amin'ilay fiaramanidina.
Miaraka amin'ny lamasinina ICE, mety ho tonga na rahoviana ianao alohan'ny hialana raha vao entinao amin'ny lamasinina alohan'ny hifindrana. Azo atao izany satria tsy misy ny fomba mialoha ny filokana na ny fanaraha-maso maharitra. Asehoy fotsiny amin'ny station, tadiavo ny famantarana ny fiaran-dalamby, ary ny board!
Amin'ny fitetezam-paritany, Mandresy ny fiaramanidina any Alemana ny ICE toy ny ataony amin'ny vidiny ihany koa. Ny mpanampy amin'ny fotoana dia lany amin'ny fomba fiasa mialoha, matiantoka bebe kokoa amin'ny ankapobeny ny fiaramanidina Travel fotoana amin'ny fivezivezena (manomboka amin'ny seranam-piara-manidina ka hatrany amin'ny toerana marina).
2) Sarany mitondra entana. Afaka mahazo antoka ianao fa handoa vola fanampiny amin'ny kitapo raha manidina fiaramanidina ianao. na izany aza, Raha mandeha amin'ny lamasinina ICE ianao dia fandoavam-bola fanampiny dia fandaniam-bola fanampiny tsy ho azonao raha mividy ianao tapakila fiaran-dalamby ICE mora vidy. Manazava, amin'ny vidin'ny ICE mora, tsy voatery handoa kitapo hiara-dia aminao ianao. Izany dia mahatonga ny ICE ho mora vidy kokoa.
3) Ny fiaran-dalamby no mety kokoa amin'ny tontolo iainana. ny Fiaran-dalamby ICE dia koa kokoa tontolo iainana fa ny fiaramanidina, izay mandray anjara amin'ny fahalotoan'ny rivotra. Mandeha lamasinina dia 20 × latsaka fandotoana famoahana gazy karbonika noho ny mandeha rivotra.
Bremen any Hamburg Lamasinina
Hanover ho any Hamburg Lamasinina
Cologne any Hamburg Lamasinina
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny kilasy mahazatra sy ny kilasy voalohany amin'ny ICE?
Tsy toy ny fiaran-dalamby hafa izay manana tapakila ho an'ny vidiny samihafa (Malagasy, raharaham-barotra, mpanatanteraka, Sns) toy ny any Trenitalia, Hafa kely ny ICE any Alemana. Misy kilasy roa isaky ny lamasinina ICE - ny kilasy voalohany sy ny faharoa. Ny tena maha samy hafa ny sokajy roa dia ny vidiny, manovaova, ary serivisy atolotra.
Satria mahaliana ny tapakila sy ny fizarana kilasy ao amin'ny fiaran-dalamby ICE, izay karazana tapakila mety ho ao amin'ny kilasy voalohany. Midika izany fa na ny tapakila fiaran-dalamby ICE mora vidy, ny vidiny azo antoka, ary Super sparpreis afaka mahazo seza kilasy voalohany. na izany aza, miovaova ny vidiny ho an'ny kilasy roa, araka ny hita etsy ambony.
Tickets kilasy voalohany:
Ny kilasy voalohany an'ny ICE dia nametraka ny fenitra ho an'ny haitraitra, Ampionòny, ary serivisy faran'izay tsara ao amin'ny rafitry ny lalamby alemanina. Namboarina ho an'ny fiaramanidina mpifaninana, Ny lamasinina ICE dia manome fampiononana ho an'ny dia lavitra. Fanampin'izany, ny efitranon'ny kilasy voalohany dia mandrafitra ny ampahatelon'ny fiaran-dalamby ary mety ho efitrefitra telo miankina amin'ny lamasinina ICE nalaina.
Ny seza misy ny efitrano voalohany dia lehibe kokoa ary alefa samy hafa amin'ny a 2-1 fandaharana fa tsy a 2-2 amin'ny kilasy faharoa. Ary io dia manafaka toerana malalaka kokoa ho an'ny mpandeha. Ary, ny seza ao amin'ny kilasy voalohany an'ny ICE dia rakotra hoditra faux ihany koa ary lehibe kokoa noho ireo ao amin'ny kilasy faharoa. Amin'ny maha-mpandraharaha mampiasa mahazatra ny kilasy voalohany, misy latabatra mafy azo ampiasaina ho an'ireo mpandeha izay te-hanao asa sasany mandritra ny làlana.
Ny serivisy fanampiny izay manavaka ny kilasy voalohany amin'ny kilasy faharoa amin'ny fiaran-dalamby ICE dia misy maimaim-poana, gazety isan'andro, WI-FI tsy voafetra, ary fanamafisana manokana hisorohana ny fanelingelenana amin'ny fandraisana ny finday. Ireo mpandeha kilasy voalohany dia afaka manafatra ny sakafony avy amin'ny sezany ihany koa raha tsy te-hiditra amin'ny trano fisakafoanana eny ambonin'ny fiaran-dalamby.
Perk hafa voafetra ho an'ny mpandeha kilasy ICE voalohany dia seza famandrihana. Ny tapakila rehetra ho an'ny kilasy voalohany, ao anatin'izany ny tapakila ICE mora, mankafy an'io tombontsoa io. Tsy mila miahiahy momba ny fahazoana seza varavarankely tampoka ianao; azonao atao ny misafidy izay seza tianao mandritra ny famandrihana ary natokana izany.
Offenburg mankany Freiburg Train Prices
Stuttgart mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Freiburg
Leipzig mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Freiburg
Nuremberg mankany Freiburg Train Prices
Tapakadin'ny ICE kilasy faharoa:
Ny fifaninanana kilasy faharoa dia tsy lavitra ny Kilasy Voalohany amin'ny fampiononana. Ankoatry ny, ny seza ao amin'ny efitranon'ny kilasy faharoa dia tsara kokoa noho ny seza fiaramanidina antonony. Plus, ergonomika izy ireo, tongava miaraka amin'ny lohalika, ary voasarona amin'ny lamba modely. Izany dia manao fitsangatsanganana lavitra sy malefaka.
Betsaka ny efitranon'ny kilasy faharoa isaky ny lamasinina ICE raha oharina amin'ireo kilasy voalohany. indrindra, ny fandaminana seza ao amin'ny kilasy faharoa dia somary teritery kokoa noho ny an'ny efitrano voalohany. Misy seza efatra isaky ny laharana (2-2 fandaharana seza), isaky ny seza roa no mizara ny tànan'ny afovoany.
bebe kokoa, ny mpandeha amin'ny kilasy faharoa dia mahazo fidirana amin'ny serivisy sasany amin'ny kilasy voalohany nefa misy fetrany. Raiso ohatra ny WI-FI. Ao amin'ny kilasy faharoa, Ny Wi-Fi dia tsy voafetra tahaka ny an'ny mpandeha kilasy Voalohany. Ny mpandeha kilasy faharoa dia tsy mahazo fidirana amin'ny gazety isan'andro koa maimaimpoana ka raha te hahazo gazety amin'ny kilasy faharoa ianao, tsy maintsy mividy iray ianao.
Ireo mpandeha kilasy faharoa dia tsy maintsy mandeha any amin'ny trano fisakafoanana raha te-hanafatra sakafo. Tsy afaka manafatra avy amin'ny sezany izy ireo satria ao amin'ny compart kilasy ICE voalohany izany. ihany koa, Ny tapakila kilasy ICE kilasy faharoa ao amin'ny saran-dalan'ny Flexpreis sy ny mpamonjy saran-dàlana dia tsy mandrakotra famandrihana seza. Raha tianao ny mametraka seza ao amin'ny kilasy Faharoa, tsy maintsy mandoa vola fanampiny 6 € ianao. Toy izany koa, ny mpandeha kilasy voalohany sy kilasy faharoa dia misy outlet amin'ny herinaratra isaky ny toerana.
Nuremberg ho Bamberg Lamasinina
Frankfurt ho Bamberg Lamasinina
Stuttgart ho Bamberg Lamasinina
Dresden ho Bamberg Lamasinina
Misy takelaka ICEY?
ICE dia manolotra lalamby amin'ny vidin'ny ICE mora vidy ho an'ny fitsangatsanganana tsy voafetra manerana an'i Alemana na Eropa. Misy karazany telo mpandalo lamasinina:
Ny alàlan'ny lalamby Alemanina dia natao ho an'ny fitsangatsanganana tsy voafetra ao Alemana. ihany koa, izany dia ho an'ny mpandeha izay tsy mipetraka any Eropa, vorontsiloza, ary Rosia. Tombontsoa vitsivitsy amin'ny alàlan'ny Rail Rail Alemanina:
Ireo mpihazona ny làlamby fiaran-dalamby dia afaka mitsidika toerana tokana bonus ivelan'i Alemana (Salzburg, Venise, ary Brussels)
Tapakila fiaran-dalamby ICE nihena ho an'ny olona rehetra eo ambany 28 taona
Fitsangatsanganana tsy manam-petra manerana an'i Alemana
Roa ny olona afaka mitahiry vola bebe kokoa amin'ny alàlan'ny Twin Pas rehefa mandeha miaraka
Ny fahaiza-mandanjalanja dia mamela ireo tompon'andraikitra amin'ny lalamby Alemanina mandehandeha na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra
Afaka mifidy ny tompon'ireo pas alemà 3 ny 15 Andro fitsangatsanganana tafaraka ao anatin'ny iray volana rehefa nividy fahazoan-dàlana.
Ny fahazoan-dàlana Eurail dia mamela ireo tsy Eropeana monina any ivelan'i Rosia, Eoropa, sy Tiorka handehanana tsy manam-petra manerana an'i Eropa. Misy ny tombony azo:
Voambola sy fihenam-bidy ho an'ny fizahan-tany fizahan-tany.
Sokajy samihafa hisafidianana - olon-dehibe, ambony, ary Tanora.
Nandalo tsy misy fetra 31 firenena Eoropeana, anisan'izany i Turkey.
Ny Pass InterRail dia manome olona mipetraka any Rosia, vorontsiloza, na fitsangatsanganana tsy voafetra manerana an'i Eropa. Ahitana ny marika amin'ity lalana ity:
Fihenam-bidy amin'ny Tapakila fiaran-dalamby ICE ho an'ny tanora sy ny tanora.
Travel tsy misy fetra 33 firenena any Eropa
Fiaran-dalamby lalamby ho an'ny mpandeha Pass izay mandeha mihoatra ny zaza roa ao ambanin'ny 11 taona.
Fotoana fitsangatsanganana ho 3 andro mankany 3 volana isaky ny olona.
Ny pass tsirairay dia misy ary tokony haseho ao anatiny 11 volana amin'ny fividianana.
Fotoana firy talohan'ny fiaingan'ny lamasinina ICE?
Mba hahazoana antoka fa ho tonga ara-potoana ianao, hanorina tokantrano, ary na dia mijery ny fivarotana, nanoro hevitra anao ny ho tonga farafaharatsiny 30 minitra alohan'ny fotoana hiainganao.
Inona no fandaharam-potoanan'ny fiaran-dalamby ICE?
Tsy raikitra ny fandehan'ny lamasinina, izay mahasarotra ny valiny. na izany aza, afaka miditra amin'ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina ICE ianao amin'ny real-time ao amin'ny pejy fandraisana Save A Train. Ampidiro ny fiavianao sy ny toerana itodihanao ary mahazoa fidirana eo noho eo amin'ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina ICE rehetra. Ny fiaran-dalamby ICE voalohany no nandao 6 aho, miaraka amin'ny lamasinina mandao tsirairay 30 minitra mankany amin'ny toerana lehibe.
Iza ireo onjan'ny ICE atolotry ny ICE?
Ny làlana iraisam-pirenena ICE dia mivoaka avy amin'ny gara iraisam-pirenena maro, anisan'izany ny Bruxelles Midi Zuid (Station Bruxelles Midi South amin'ny teny anglisy), Arnhem Central, ary Amsterdam Central, sy ny maro hafa.
Ho tonga, Lamasinina ICE tonga eo 11 Ivontoerana Alemanina ary serivisy Soisa iray. ihany koa, gara lehibe hahatongavan'i Oberhausen, Duisburg, Dusseldorf, Cologne, Seranam-piaramanidina Frankfurt (Seranam-piaramanidina lehibe any Frankfurt), Manheim, Siegburg, ary ny hafa.
bebe kokoa, Dusseldorf dia tanàna tsara tarehy miorina manamorona an'i Rhine miaraka amina tantara sy fahatsapana kolontsaina manankarena. Betsaka ny zava-manintona ara-kolontsaina sy manan-tantara hita maso sy Toerana mahafinaritra lalana ho an'ny fitsangantsanganana sy faritra fivarotana lehibe. Toerana tonga lafatra ho an'ny a fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny namana na fianakaviana.
Avy any Amsterdam Central (Centraal amin'ny fiteny holandey ary midika hoe Central Station), afaka tonga any Frankfurt ianao, ilay tanàna fantatra amin'ny renivohitra ara-bola any Europe. Inona koa, misy tora-pasika tsara tarehy, tranombakoka, sy trano fisakafoanana hitsidika.
Cologne no ivon'ny zavakanto, maritrano, SY manan-karena tantara. Miaraka amin'ny lamasinina ICE avy any Amsterdam Centraal, afaka tonga any Cologne ianao mba hisitraka ny tenanao ao amin'ny hatsaran-tarehy amin'ity tanàna ity.
Tokoa, misy zaridaina botika tsara tarehy, trano fisakafoanana manana sangan'asan'ny culinary, toy ireny, tranombakoka, sy pub hihinana. ihany koa, raha tsy azonao antoka hoe inona ny toerana tokony hofidina, ny algorithm dia hanampy anao hisafidy.
Frankfurt ho Heidelberg Lamasinina
Stuttgart ho Heidelberg Lamasinina
Nuremberg ho Heidelberg Lamasinina
Bonn any Heidelberg Lamasinina
IQ mampiofana FAQ
Inona no tokony ho entiko mitondra any amin'ny ICE?
Ho an'ny tenanao? Ento ny antontan-taratasinao, pasipaoro manana, ary tsy voatery ny fiantohana amin'ny dia fa tsara ho an'ny fahasalamanao ity antontan-taratasy ity.
Orinasa manana ICE?
Ny Intercity-Express (RANOMANDRY) Tompon'ny mpamatsy fiaran-dalamby Alemà, ny Deutsche Bahn, ary DB dia an'ny governemanta federaly alemanina.
Aiza no ahafahako mandeha amin'ny ICE?
Ny ICE dia mitety ny tanàna rehetra any Alemaina. Misy ny iraisam-pirenena Lalan'ny dia ICE ho an'ny firenena sasany manamorona an'i Alemaina.
Inona avy ireo fomba fiasa amin'ny zotram-piaramanidina ICE??
Tsy misy ny fomba fiasa mahafinaritra. Rehefa tonga any amin'ny station ianao, jereo ny takelaka mpanondro mba hahitana ny fiaran-dalanao. Fanampin'izany, dia afaka miakatra amin'ny lamasinina ianao amin'ny fotoana rehetra alohan'ny handaminana azy.
Inona avy ireo serivisy ao amin'ny fiaran-dalamby ICE?
ICE Train dia manolotra amin'ny sakafo fisakafoanana izay misy sakafo ao amin'ny menio, jiro maivana, sy zava-pisotro isan-karazany. koa, misy seranana fiampangana eo akaikin'ny seza rehetra, Wifi maimaim-poana (tsy voafetra ao amin'ny Kilasy Voalohany), ary amplifier ho an'ny fandraisana telefaona tsy tapaka (ho an'ny Kilasy Voalohany ihany).
FAQ IQ no tena angatahana – Moa ve mila mametraka seza mialoha mialoha eo amin'ny ICE?
Tsy mila mametraka seza mialoha ianao, fa afaka manao reservation seza ianao raha maniry. Raha mividy tapakila kilasy voalohany ianao, mahafeno fepetra ho azy ianao amin'ny seza voatokana maimaimpoana.
Misy Aterineto WiFi ve ao anaty ICE?
Eny, misy. Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny Faharoa, Maimaimpoana ny Internet WI-FI fa tsy voafetra tahaka ny amin'ny Kilasy voalohany.
Konstanz ny Lindau Lamasinina
Memmingen ny Lindau Lamasinina
Biberach ho Lindau Lamasinina
Ulm ny Lindau Lamasinina
Farany, Raha tonga hatreto aloha ianao, fantatrao izay rehetra ilainao momba ny fiaran-dalamby ICE ary vonona hividy ny tapakilan'ny fiaran-dalamby ICE SaveATrain.com.
Manana tapakila fiaran-dalamby ho an'ireo mpandraharaha gara izahay:
NSB Vy Norvezy
Deutsche Bahn ICE Alemana
Deutsche Bahn Alemana
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dmg – (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml ary afaka manova ny fiteny / de to / nl na / fr sy ny fiteny maro hafa.
Torohevitra toro-lalana amin'ny fiara
Torohevitra Eco Travel
Fiaran-dalamby Travel Denmark
Fiaran-dalamby in Finland
Train Travel Gresy
Train Travel Japana
Nandeha lamasinina Luxembourg
Fiaran-dalamby any Norvezy
Train Travel Polonina
Fiaran-dalamby any Skotlandia
Fiaran-dalamby any Soeda
Torohevitra momba ny dia
Yoga any Eoropa